Studio Famolavolana Misy Galera
Studio Famolavolana Misy Galera Ny trano fitehirizam-bokatra niova ho an'ny studio famoronana multimedia chic, ny Paradox House dia mahita ny fifandanjana tonga lafatra eo amin'ny fiasa sy ny fomba nefa izy io dia taratry ny tsiro sy fomba fiaina tokana. Namorona studio endrika famolavolana mahavariana izay misy tsipika madio sy zoro izay mampiseho ireo boaty fitaratra misy loko mavo izay malaza eo amin'ny mezzanine. Ny endrika sy andalana geometrika dia maoderina sy mahavariana nefa natao tsara mba hiantohana toerana tokana miasa.
Ny Foibe Fianarana
Ny Foibe Fianarana Starlit Learning Center dia natao mba hanomezana fampiofanana fampisehoana amin'ny tontolo fianarana miala voly ho an'ny ankizy 2-6. Ireo ankizy any Hong Kong dia mianatra ao anatin'ny fanerena mafy. Mba hanomezana tanjaka ny endrika sy habaka amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoana ary mifanaraka amin'ny fandaharan'asa isan-karazany, dia mampihatra ny drafitry ny Tanànan'ny Romana fahiny isika. Ny singa miendrika boribory dia fahita amin'ny fitaovam-piadiana mamirapiratra ao anaty lamina famoronana mba hanakodia ny efitrano fianarana sy ny studio eo anelanelan'ny elatra roa miavaka. Ity ivontoeram-pianarana ity dia natao hamoronana rivo-pianarana mahafinaritra miaraka amin'ny habaka indrindra.
Ny Famolavolana Birao
Ny Famolavolana Birao Satria orinasa mpamatsy vola mifototra amin'ny varotra fitrandrahana, ny fahombiazana ary ny vokatra dia lafiny lehibe amin'ny fanaon'ny orinasa. Io zavaboary io dia noforonin'ny natiora. Ny aingam-panahy hafa hita amin'ny famolavolana dia ny fanamafisana ny geometria. Ireo singa manan-danja ireo dia teo amin'ny faran'ny drafitra ary avy eo nadika tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny fahaizan'ny geometrika sy ny toe-tsaina amin'ny endrika sy ny habaka. Amin'ny fitazonana ny laza sy ny lazan'ny trano ara-barotra an'izao tontolo izao, dia ny sehatra orinasa tsy manam-paharoa dia teraka amin'ny alàlan'ny fampiasana vera sy ny vy.
Trano Fisakafoanana Barbeque
Trano Fisakafoanana Barbeque Ny faritry ny tetikasa dia ny famerenany ny fivarotana moto 72 metatra toradroa ao anaty trano fisakafoanana Barbeque vaovao. Ny faritry ny asa dia ahitana ny famolavolana feno ny efi-trano ivelany sy anatiny. Ny aty ivelany dia aingam-panahy avy amin'ny grille Barbeque miaraka amin'ny lamina mainty sy fotsy loko misy ny saribao. Ny iray amin'ireo fanamby amin'ity tetikasa ity dia ny fampifanarahana ny fepetra takian'ny fihetsiketsehana (seza 40 amin'ny toerana fisakafoanana) amin'ny sehatra kely tahaka izao. Ankoatr'izay, tsy maintsy miara-miasa amin'ny teti-bola kely tsy dia mahazatra izahay (40 dolara amerikana), izay ahitana ireo unit HVAC vaovao sy lakozia ara-barotra vaovao.
Trano Fonenana Ny trano fonenana dia natao amin'ny fahatsorana tsotra, fisokafana ary hazavana voajanahary ao an-tsaina. Ny dian-tongotry ny tranobe dia taratry ny fanakanana ny tranokala misy ary ny fomba ofisialy dia midika hoe madio sy tsotra. Atrium sy balkona dia hita eo amin'ny ilany avaratry ny trano manazava ny fidirana sy ny efitrano fisakafoana. Ny varavarankelin'ny sliding dia omena any amin'ny faran'ny atsimo amin'ny trano izay ahafahan'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny lakozia ahafahana manatsara ny jiro voajanahary ary manome fahafaha-manaon'ny haavo. Skylights dia aroso manerana ny tranobe hanamafisana bebe kokoa ireo hevitra amin'ny famoronana.
Ny Foibem-Pahalalana Vonjimaika
Ny Foibem-Pahalalana Vonjimaika Ny tetikasa dia pavilion tsy maharitra mifangaro ao amin'ny Trafalgar, Londres noho ny asa sy hetsika isan-karazany. Ny firafitra natolotra dia manasongadina ny hevitry ny "vonjimaika" amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo boaty fandefasana recycling ho toy ny fitaovana fananganana voalohany. Ny toetoetran'ny metaly dia natao hananganana fifandraisana mifanohitra amin'ilay trano misy ankehitriny manamafy ny toetran'ny tetezamita ilay hevitra. Ary koa, ny fomba ofisialy ny tranobe dia voalamina ary narafitra tamin'ny endrika kisendrasendra namorona tsipika manokana mandritra ny fotoana fohy eo amin'ny toerana mba hisarihana ny fifandraisana ara-potoana mandritra ny fotoana fohy.
Studio Famolavolana Misy Galera Ny Foibe Fianarana Ny Famolavolana Birao Trano Fisakafoanana Barbeque Trano Fonenana Ny Foibem-Pahalalana Vonjimaika